Indigestion (အစာမကြေခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Indigestion (အစာမကြေခြင်း)
Indigestion (အစာမကြေခြင်း) ကဘာလဲ။
Indigestion ကို အစာမကြေခြင်းလို့ ခေါ်ပြီး အစာအိမ် အူလမ်းကြောင်းအပေါ်ပိုင်း သက်တောင့်သက်သာမရှိခြင်း၊ နာကျင်ခြင်းကို ဆိုလိုပါတယ်။ Indigestion မှာ လေထခြင်း၊ ပျို့ခြင်း၊ လေချဉ်တက်ခြင်း အစရှိတဲ့ လက္ခဏာတွေ ပါဝင်ပြီး အခံရှိတဲ့ ပြဿနာရဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
Indigestion ဟာ ဘယ်လောက်ထိ အဖြစ်များသလဲ။
Indigestion ဟာ ရောဂါတစ်ခုမဟုတ်ပဲ မကျန်းမာတဲ့ အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ကာ လူတိုင်း အချိန်တိုင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်ပွားနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေကို လျှော့ချခြင်းအားဖြင့် စီမံနိုင်ပါတယ်။ အချက်အလက်များထပ်မံသိရှိဖို့အတွက် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးသင့်ပါတယ်။
Indigestion ရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေက ဘာတွေလဲ။
Indigestion ရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့
ပါးစပ်အတွင်း အက်ဆစ်အရသာ ရခြင်း
ယေဘူယျအသိပေးချက် – သင့်မှာ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်တွေထဲက တစ်ခုခုရှိခဲ့ရင် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆက်သွယ်သင့်ပါတယ်။
ပြင်းထန်စွာ အန်ခြင်း၊ သွေးအန်ခြင်း
အကြောင်းပြချက်မရှိပဲ ကိုယ်အလေးချိန် ကျဆင်းခြင်း
ဘာတွေက Indigestion ဖြစ်ပွားစေသလဲ။
အစာမကြေခြင်းဟာ ရောဂါတစ်ခုမဟုတ်ပဲ လက္ခဏာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါရောဂါတွေက အစာမကြေခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Gastro-esophageal reflux disease (GERD) – အက်ဆစ်တွေ အစာမြိုပြွန်ပေါ်ကို ပြန်တက်တဲ့ အခြေအနေဖြစ်ပြီး အက်ဆစ်တွေဟာ အစာပြွန်ကို ပျက်စီးစေနိုင်ပါတယ်။
အဝလွန်ခြင်းကြောင့် အစာမကြေခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Irritable bowel syndrome (IBS) – အူပုံမှန်မဟုတ်ပဲ ကျုံ့ခြင်း
အစာအိမ် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း – Helicobacter Pylori
အစာအိမ် အနာဖြစ်ခြင်း – အစာအိမ် နံရံ ပါးခြင်း၊ အပေါက်ဖြစ်ခြင်း
အချို့ဆေးတွေကလည်း အစာမကြေခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
Nitrates ပါဝင်တဲ့ ဆေးများ (သွေးပေါင်ကျဆေး)
Estrogen နဲ့ ကိုယ်ဝန်တားဆေးများ
ဘယ်အရာတွေက Indigestion ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေပါသလဲ။
နေ့စဉ် အပြုအမူ အကျင့်တွေဟာ အစာမကြေခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ပြင် ရောဂါအချို့နဲ့ ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကြောင့်လည်း အစာမကြေခြင်း ဖြစ်နိုင်ပြီး အချို့အရာတွေက အစာမကြေခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
အစား အများကြီး (သို့) အမြန်စားခြင်း
Indigestion ဟုတ်မဟုတ်ကို ဘယ်လိုအဖြေရှာအတည်ပြုသလဲ။
သင့်ဆရာဝန်က ရောဂါလက္ခဏာ မေးမြန်းခြင်း၊ ရောဂါရာဇဝင်မေးမြန်းခြင်းနဲ့ အစာအိမ်နဲ့ ရင်ခေါင်း စမ်းသပ်ခြင်း ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ သင့်ဆရာဝန်က အစာမကြေခြင်းကို ဖြစ်စေတဲ့ အခြားအကြောင်းရင်းတွေကို ဖယ်ထုတ်ပြီး သင့်အခြေအနေအကြောင်း ပိုမိုနားလည်စေဖို့ အောက်ပါ စစ်ဆေးမှုတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။
မှန်ပြောင်း ကြည့်ခြင်း – ဒီစစ်ဆေးမှုကို ကုသမှုမတုန့်ပြန်တဲ့ လူနာတွေမှာ ပြုလုပ်ပြီး ကင်မရာတပ်ထားတဲ့ သေးငယ်တဲ့ မှန်ပြောင်းကို အစာအိမ်ထဲထည့်ကြည့်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
H pylori tests – စစ်ဆေးမှု အုပ်စု ဖြစ်ပြီး လူနာရဲ့ ပြင်းထန်မှုနဲ့ အခြားအချက်တွေပေါ်မူတည်ကာ Hpylori ရှာဖွေဖို့ အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်။ stool antigen test, breath test နဲ့ သွေးစစ်ဆေးမှုတွေ ပါဝင်ပါတယ်။
အသည်းလုပ်ငန်းဆောင်တာ စစ်ဆေးခြင်း – အသည်းက သည်းခြေရည်ကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ သည်းခြေရည်က အဆီကို ဖြိုဖျက်ပါတယ်။ အသည်းပြဿနာရှိခြင်းဟာ သည်းခြေရည်မထုတ်နိုင်တာမို့ အစာမကြေခြင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
X-rays, ultrasound – အစာအိမ်မှာ ပိတ်နေတာရှိလား ရှာဖွေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
Indigestion ကို ဘယ်လိုကုသလဲ။
ကုသမှုဟာ အစာမကြေဖြစ်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေကို လျှော့ချပေးပြီး နေသာစေပါတယ်။ အခြေခံ အကြောင်းရင်းကိုလည်း ကုသရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာဝန်က အခြေခံ အကြောင်းရင်းပေါ်မူတည်ပြီး အခြား ပံ့ပိုးပေးတဲ့ ကုထုံးတွေကိုပါ ညွှန်ကြားပေးနိုင်ပါတယ်။
လူနေမှုပုံစံပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးတွေအသုံးပြုခြင်းက Indigestion ကို ကုသရာမှာ ဘယ်လိုအထောက်အကူပြုနိုင်မလဲ။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် Indigestion ကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ညအချိန်အစာမကြေဖြစ်ခြင်းကို ခံစားရရင် ညဘက်အစာစားခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
ရင်ပူစေတဲ့ အစပ်စာ၊ အဆီများတဲ့ အစားတွေကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။
ကျန်းမာတဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်းပါ။
ကော်ဖီ၊ အချိုရည်၊ အရက်သောက်ခြင်းကို လျှော့ပါ။
အစာအိမ်နံရံကို ထိခိုက်နိုင်တဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ၊ အခြားဆေးတွေကို ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး အစားထိုးပါ။
Indigestion. http://www.nhs.uk/Conditions/Indigestion/Pages/Diagnosis.aspx. Accessed June 13, 2016